Minyengetero 10 Yekusimbisa Nesimba | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Minyengetero 10 Yekusimbisa Nesimba
Minyengetero 10 Yekusimbisa Nesimba
Nhasi tichange tichishanda ne10 Prayer points dze simba uye nhungamiro. Kuti ufambe zvakanaka uye ubudirire muhupenyu, murume anoda simba rekuramba achifamba kunyangwe paine zvinopesana naye uye nhungamiro yekuziva kwekuenda uye kwekusaenda. Kana kushaya simba, anozove pasina muhupenyu. Uye kana gwara rikashaikwa, murume anoshandisa ese makore ehupenyu hwake achiedza kutsvaga nzira. Hazvishamise kuti rugwaro runoti mubhuku ra Zvirevo 29:18 kana pasina chiratidzo, vanhu vanoramba kuzvidzora; Asi anofara ndiye anochengeta mutemo.
Iyo nyaya yeiyo Isrealites muenzaniso usingagumi wesimba uye nhungamiro. Rugwaro rwakanyora kuti vakafamba makore makumi mana vasina tsoka yavo isina kuparadzwa. Vakatungamirwa kubuda muEgipita nemuporofita ainzi Mosesi. Zvingadai zvakaomera kwazvo Mosesi kutungamira vana veIsreal kubva muhusungwa vasina hutungamiriri hwaMwari. Rugwaro rwakanyora shongwe yemoto yakavatungamira husiku uye mweya washe hauna kubva kuna Mosesi.
Zvimwechetezvo mukurarama kwedu, tinoda simba nekutungamirirwa naMwari. Kune vazhinji vedu isu vanofanirwa kunge vakaita zvinangwa zvikuru, asi nekuti tinoshaya simba rekuramba tichiedza takarambirwa maropafadzo iwayo. Vamwe vanhu kune dambudziko ndere kushayikwa kwemaonero. Kana pasina nhungamiro kubva kuna Mwari, hapana chiono uye kana chiratidzo chikashaikwa, kuona kwaisazove munzvimbo. Zvino munhu angafamba sei asingaone? Samson angadai asina kunamatira kufa nemuvengi wake dai kuona kwake kwanga kuchakanaka. Kuti isu tikunde kupfuura muganho, zvakakosha kuti tinamatire simba nekutungamirwa naMwari Samasimba.
Kunamata Points Yekusimba
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione zuva idzva, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata simba rinobva kumusoro. Ndinoramba kuvimba nesimba rangu rinofa kuti ndiite zvinangwa muhupenyu. Ndinoziva kuti ndimi mupi wehupenyu, uye musimudziri wevanhu. Ndinonamata kuti muchandisimbisa muzita raJesu. Ndinokumbira simba reWekumusoro soro kuti rizare pamusoro pangu mumativi ese ehupenyu hwangu kuti simba rinodiwa, ishe regai ndiwane simba muzita raJesu.
Baba Tenzi, pasina simba renyu ndiri munhu asina simba. Uye ini ndinonzwisisa kuti munhu asina kusimba haana nzvimbo munyika ino. Ini handidi kukandirwa nemhepo dzematambudziko. Ini handidi kutambudzwa nemaoko ekutambudzika. Ndinonamatira simba rekuzvisunungura kubva kumarudzi ese ematambudziko nematambudziko, ishe ndipeiwo simba rakadai muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinoziva kuti ndiri mutadzi. Tenzi ndinonamata kuti mundipe simba rekuramba zvivi nezvakaipa nemuzita raJesu. Ndinonamata simba rekurwa neantics dzedhiyabhorosi, simba rekukunda hutera hwangu, ishe, simba renyu ngariuye pandiri muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamatira simba rekuzadzisa zvinangwa zvikuru muhupenyu. Ndinoraira nenyasha dzeWekumusoro-soro, ndipei ini simba rekurega kumira. Ini ndinonzwisisa kuti hupenyu hauna kuvakirwa pamubhedha wemarosi, asi ishe ndinonamata kuti mundipe simba rekuziva mazuva akaipa, ndipeiwo nyasha dzekusazorega kukuvimbai uye mundipe simba rekusundira kumberi kana nguva chaiyo inouya nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira simba rekuti ndisamboneta mukutsvaga kwangu zvinhu zvemweya. Ishe, ndinonamatira simba rekusamboneta mukutsvaka kwangu kukuzivai zvakanyanya. MuApostora Pauro akataura kuti ini ndinogona kukuziva iwe uye nesimba rekudzora kwako. Ishe ndipeiwo simba rekusazombomira kunzwa nyota, ndipeiwo simba rekurega kurega kuda kuziva iwe, ndipewo ini simba renzara yekuti usatombopedza mukati mangu, muzita raJesu.
Kunamata Points Kwenhungamiro
Ishe Jesu, ndinonamatira nhungamiro yemweya kubva kwamuri. Ndinonamata kuti unditungamire muchikamu chakarurama kuti ndiende muzita raJesu. Tenzi, kana musingaendi neni ndinoramba kufamba neinchi, baba, ndinonamata kuti mweya nekuvapo kwenyu zviende neni muzita raJesu.
Ishe Jesu, pamusoro pehupenyu hwangu hwewanano, nditungamirirei pane zvekuita. Ishe, ini ndinoramba kusiya hupenyu hwangu kune ramangwana zvekare. Ndinonamata kuti mweya wako nesimba rako rinditungamire panaani wekuroora muzita raJesu. Ishe Jesu, ndakuitai mukuru wehupenyu hwangu, ndinonamata kuti muchafambisa ngarava yehupenyu hwangu kubva panguva ino muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinoda nhungamiro yenyu pamusoro pebasa rangu. Ndinonamata kuti iwe unditungamirire pane zvekuita. Ini ndinonzwisisa kuti kana paine gwara, rwendo rwehupenyu runodzikira kusagadzikana. Ndiri kuda kuti rwendo rwehupenyu hwangu runyanye kunetsa, Ishe, ndokumbirawo mutungamire pabasa rangu muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamatira gwara renyu pazvinhu zvese zvinondibata. Ini ndinonzwisisa kuti pamberi pako, hapana zivo uye shure kwako, hapana zivo inopfuura yako. Ndinonamata kuti kubva zvino, mweya wako utange kunditungamira pane zvinhu zvekuita, nguva yekutaura uye nguva yekunyarara, uye kunyangwe pandinenge ndashama muromo wangu kuti nditaure, vanozadzwa nemashoko ako muzita raJesu.
Ishe, ini handidi kufamba nenyika ino sebofu. Ini ndoda kufamba neakakwana kuona. Ndinonamata kuti mundipe nyasha yekuona chiratidzo. Ndinonamata kuti Mweya Mutsvene nesimba renyu zviuye pamusoro pangu uye muvhure pfungwa dzangu dzose kuti ndinzwe kubva kwamuri. Ndinonamatira nyasha dzekuzviisa pasi pekutungamira, Ishe, ndipeiwo kwandiri muzita raJesu.
Previous nyayaZvikonzero Gumi Nei Uchifanira Kunamata Nerugwaro
inoteveraKunamata Kunongedzera Kwete Kukundikana Chinangwa
Munamato wekuporesa uye Kudzivirira kweCoronavirus
Munamato Wezvishamiso Zvemari Muna 2021